IHuawei P20 Pro eYurophu ifumana i-beta ye-Android Pie | I-Androidsis
IHuawei yenye yezona zinto zisebenza ngokukhawuleza ekuhlaziyeni iifowuni kwiPie yePie. Iiveki ezimbalwa ezidlulileyo i-beta yaqala kwezinye zeefowuni zazo. Kubonakala ngathi le veki iphambili kwezinye iimodeli zomenzi waseTshayina. Ngoku kuza ithuba leHuawei P20 Pro eYurophu, Eziqala ukufumana i-beta.
Imalunga nePie Beta ye-Android, okuza ne-EMUI 9.0 Ukufikelela esiphelweni esiphezulu sophawu lwesiTshayina. Elinye inyathelo ekukhutshweni kwalo kohlaziyo, olusebenza ngoku, ngoku abasebenzisi beHuawei P20 Pro ngabo banethamsanqa.
Ngale ndlela, abasebenzisi abaneHuawei P20 Pro baqala ukufumana uphuculo oluziswa yinguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza kaGoogle. Ngokukodwa kuya kufuneka uqaphele ukuphuculwa kokusebenza kwefowuni. Kufuneka songeze uluhlu oluhlaziyiweyo lomntu.
Kuba bafika benenguqulo entsha ye-EMUI, athe umenzi wayivelisa kwinyanga nje edlulileyo. Ke abasebenzisi abaneHuawei P20 Pro bazifumana beneendaba ezininzi ngaxeshanye. Olu luhlobo lwe-beta yePie ye-Android.
Ukukhutshwa kolu hlaziyo kwenzeka ngendlela yezigaba. Ke kunokwenzeka ukuba kukho abasebenzisi eYurophu ngale Huawei P20 Pro esele bayifumene, nabanye abasalindileyo. Kufanele ukuba yenzeke kwezi ntsuku kwaye ifikelele kubo bonke abasebenzisi ngoku.
Linyathelo elungileyo kubasebenzisi, kwaye kufuneka kuthiwe utshintsho oluza nePie ye-Android luninzi. Okwangoku, awaziwa umhla oza kugqitywa ngawo uhlobo oluzinzileyo. Uphawu lwaseTshayina sele luhlaziya iifowuni ezininzi ukuya kwi-beta, njengeHuawei P20 Pro.Ngoko kuya kufuneka silinde de kufike uhlobo oluzinzileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » I-Android Pie beta iqala ukufikelela kwiHuawei P20 Pro eYurophu
Ikhamera yeHuawei P20 Pro ayigqithiswanga yenye ye-iPhone XS